काठमाडौं, ८ माघ– अमेरिकाको जर्जिया राज्यस्थित इन्स्टिच्युट फर बायोमेडिकल साइन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत नेपाली डाक्टर सुदीप खड्का यतिबेला चर्चामा रहेका छन् । विश्वमै खतरनाक मानिएको इबोला भाइरसको औषधि पत्ता लगाएर उनी चर्चामा आएका हुन् ।
जर्जिया राज्यस्थित इन्स्टिच्युट फर बायोमेडिकल साइन्स विश्वयविद्यालयमा नेपाली डा. खड्कासहित कार्यरत ११ जनाको वैज्ञानिक टोलीले हालसालै विश्वमै खतरनाक मानिएको इबोला भइसरको औषधि पत्ता लगाएका छन् ।
नेपाली डा.सुदिपसहित अन्य देशका १० जना वैज्ञानिकहरुको टोलीले तीन वर्ष लगाएर इबोला भाइरसको औषधि पत्ता लगाउन सफल भए । तीन वर्षमा दुई लाख वटा औषधिको अनुसन्धानबाट ५६ सम्भावित औषधि पत्ता लागाउन सफल भएको डा.खड्काले लोकान्तरलाई बताए ।
‘हामीले दुई लाख ओटा औषधिको परीक्षणबाट इबोला भाइरसको औषधि पत्ता लगाउन सफल भयौं’ डा. खड्काले लोकान्तरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘हामीले पत्ता लगाएको औषधिले जीका भाइरस विरुद्धमा पनि काम गर्छ । हाम्रो अनुसन्धानले इबोला र जीकाको उपचार हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।’
औषधिको प्रयोग विधि, मात्रा र साइड इफेक्टबारे थप अनुसन्धान शुरु गरिएको भन्दै उनले इबोलाको औषधि प्रयोगमा आउँन केही वर्ष लाग्न सक्ने बताए ।
संसारकै खतरनाक रोग मानिने इबोलाको कुनै औषधि छैन । अत्यन्तै चाँडो सर्ने भएकाले यो रोगले छिटै माहामारीको रुप लिने गरेको छ ।
इबोलाको संक्रमण नफैलियोस् भनेर अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुमा विदेश यात्राबाट फर्किने यात्रुलाई इन्फ्रारेड क्यामेराको प्रयोगबाट सम्भावित संक्रमित यात्रुको पहिचान गरिन्छ ।
सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील मानिने अमेरिकाको चौथो तहको प्रयोगशालामा इबोला भाइरसको औषधि पत्ता लगाउनु सफल भएको डा. खड्काले बताए ।
लामो स्वास्थ्य सुरक्षा पाँच र तालिम पछि मात्रै प्रयोगशालामा काम गर्ने अनुमति अमेरिकी सरकारले दिन्छ ।
को हुन् डाक्टर सुदीप ?
डा.सुदीप खड्का बागलुङका पूर्वसांसद स्वर्गीय हरिबहादुर खड्का र गरिवी निवारण तथा सहकारी राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्काका जेठा छोरा हुन् । शिक्षित परिवारमा जन्मिएका खड्का सानैदेखि अन्तरमुखी स्वभावका थिए । आधारभूत शिक्षाको सुरुवातमा नै उनी अन्य पुस्तकहरु पढ्न रुची राख्थे ।
‘मलाई अहिले पनि संझना छ, म प्राथमिक तहमा पढ्दा देखि नै कोर्ष भन्दा पनि बाहिरी पुस्तकहरु पढ्न रुचाउँथें । मेरो घर नजिकै फुपुको घरमा त्यतिबेला साझा प्रकाशन भाडामा बस्थ्यो । त्यहि गएर म पुस्तकहरु पढ्ने गर्थें’ खड्काले लोकान्तरसँग भने ।
अमेरिकामा १६ वर्ष विताएका डा. सुदीपलाई भने अमेरीकाको ग्रिन कार्ड प्रति कुनै मोह छैन । सन् २००३ देखी नै नेपाली राहदानीमा नै अमेरीकामा बस्दै आएका छन्
एमबिबिएस पढाएर छोरालाई डाक्टर बनाउने सुदीपको बुवाआमाको सपना थियोे । एमबिबिएस पढाउने बुवाको निर्णयलाई सुदीपले अस्वीकार गरीदिए । डाक्टरले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अरुले पत्ता लगाएर तयार भएको औषधि खानु भन्ने सल्लाह दिन्छन् । तर सुदीपलाई आफैले नयाँ औषधि पत्ता लगाउने चाहना थियो ।
‘बुवाले मलाई नाम निकाल्न सक्दैनस् अनि डाक्टर पढ्दिन भन्छस् भनेर गाली गरेपछि मेरो मनमा इगो भयो । मैले एमबिबिएसमा नाम निकाल्छु तर पढ्दिन भन्ने सोचेर काडमाडौं विश्वविद्यालयमा इन्ट्रान्स दिए । नाम निकालेर भर्ना भए तर एकवर्ष पनि पढिन ।’
साइन्टिस्ट बन्ने सपना लिएका सुदीप बुबाको डाक्टर बनाउने सपनालाई त्यागेर सन् २००३ मा अमेरीका गए । नेपालमा एमबिबिएस भर्ना भएको वर्ष दिन नपुग्दै साइन्टिस्ट बन्न अमेरिका पुगेका सुदीपले अमेरिकामै पीएचडी गरे ।
२०७१ सालमा बाग्लुङमा सुदीपका बुवा सभासद हरिबहादुर खड्काको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भयो । बावुको मृत्युको खबर पाएपछि उनी नेपाल फर्किए ।
बावुको मृत्युपछि राजनीति गर्ने निर्णय पुगे सुदीप
२०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका खड्काको मृत्युपछि बाग्लुङमा उप–निर्वाचन हुने भयो । निर्वाचन हुनेभएपछि उनले आफ्नो साइन्टिस्ट बन्ने सपनालाई त्यागेर बुबाको राजनीतिक सपना पुरा गर्ने निर्णय लिए । सुदीपले केन्द्रबाट टिकट पनि पाए ।
तर सुदीप राजनीतिमा आएको त्यहाका स्थानीय नेताहरुलाई मन परेन । सुदीप राजनीतिमा आए आफ्नो राजनीतिक यात्रा संकटमा पर्ने सोचेर जिल्लाका नेताहरुले विरोध जनाए । सुदीपले टिकट पाएको स्थानीयले नेताले नै विरोध गरेका थिए ।
सुदीपको विरोध भएपछि पार्टीले उनकी आमा चम्पादेवीलाई टिकट दियो । सुदीपले आमालाई राजनीतिक यात्रामा सहयोग गरेर दुई वर्ष नेपालमै रहे । राजनीतिमा आफ्नो चाहना भएपनि अवसर नपाएपछि उनी रिसर्च र अध्ययन अघि बढाउन फेरि अमेरिका फर्किए ।
सुदीपकी आमा अहिले सहकारी तथा गरिवी निवारण राज्य मन्त्री छिन् ।
१६ वर्ष अमेरीका बसेका डा. सुदीपले लिएनन् ग्रिन कार्ड
अमेरिका भनेपछि नेपालीहरु हुरुक्क हुन्छन् । अमेरिका जाने नेपालीहरु त्यहा पुगेर ग्रिन कार्ड प्राप्त गरी उतै ‘सेटल’ हुने सपना बनाउछन् । तर अमेरिकामा १६ वर्ष विताएका डा. सुदीपलाई भने अमेरीकाको ग्रिन कार्ड प्रति कुनै मोह छैन । सन् २००३ देखी नै नेपाली राहदानीमा नै अमेरीकामा बस्दै आएका छन् ।
‘मैले बुबाको सपनालाई पनि जितेर १९ वर्षको उमेरमा अमेरिका आए । यहाँ आएपछि लाग्यो, यहाँ पढेपछि अब यतै बस्नुपर्छ । यतै विवाह हुन्छ बच्चा पनि यतै हुर्किन्छन्’ साइन्टिस्ट बन्ने सपना लिएर अमेरीका पुगेको दिन संझदै खड्काले भने, ‘मैले नेपाल र मेरा बुबाआमालाई संझिए । र अमेरीका टेकेको ५ मिनेटमा अठोट गरे, मेरो अध्ययन सकिएपछि म नेपाल नै फर्किने छु ।’
उनले अमेरीका पुगेको दिन आफैसँग गरेको अठोटलाई कायमै राखेका छन् । उनी अहिले पनि नेपाली राहदानीमा अनुसन्धान वैज्ञानिक भिषामा अमेरीकामा कार्यरत छन् ।
शहर केन्द्रीत नेपालको विकासक्रम डा. सुदीपलाई चित्त बुझेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा सुविधा र शिक्षा पु¥याउने उनको चाहना छ । ‘नेपालमा राजधानी केन्द्रीत विकास छ । मलाई बाग्लुङमा नै केही गर्ने चाहना छ । नेपाल फर्किएर दुर्गम ठाउँमा विद्यालय खोलेर क्षमता भएकालाई पढ्ने अवसर दिनुछ ।’ उनले आफ्नो योजना सुनाए ।
‘मसंगै पढेका अरु साथीहरु पनि म जस्तै क्षमता भएकाहरु पनि थिए । तर नेपालमा पढाउने सिस्टम राम्रो नहुँदा र अवसर समेत नपाउँदा उनीहरुको क्षमता खेर गएको छ’ आफू नेपालको राजनीतिमा फर्किनु पर्नाको कारण खुलाउँदै उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अवसर र शिक्षा पाउन सके क्षमतावान् विद्यार्थीले नेपालको नाम विश्वमा राख्न सक्छन् । नेपालमा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न सके ने कयौं साइन्टिस्ट जन्मन्छन् । उनीहरुले नेपालको नाम विश्वमा चिनाउन सक्छन् ।’
नेपाल फर्किए पछि उनको अर्को महत्वपूर्ण योजना छ । राजनीतिमा लागेर आफ्नो बुवाको सपनाहरुलाई पूरा गर्ने ।
‘मेरो योजना नेपाल नै फर्कने हो । अबको ५ देखि १० वर्ष भित्रमा म नेपाल फर्किन्छु । नेपाल फर्किएर राजनीति र अर्थव्यावस्थामा काम गर्ने चाहना छ ।’ उनले भने, ‘बुबाको मृत्यु पछि नै राजनीतिमा सक्रिय हुने मन थियो त्यतिबेला वातावरण नै मिलेन । अब नेपाल आएपछि राजनीतिमा सक्रिय हुनेछु ।’
माघ ८, २०७४ मा प्रकाशित